हिमाल खबरपत्रिका | ‘सरकारको निर्णय पर्खेका छौं’
‘सरकारको निर्णय पर्खेका छौं’
१२ असारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त राजन पोखरेल भन्छन्, “निजगढ विमानस्थलको प्रगति सरकारको निर्णयमा भर पर्छ।”
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा तपाईंको लामो अनुभवलाई महानिर्देशक भएपछि कसरी उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता हवाई सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने नै हो । दोस्रो, निर्माणाधीन ठूला विमानस्थललाई व्यावसायिक रुपमा संचालन गर्ने । त्यस्तै, तराईका विमानस्थलको सम्भाव्यता हेरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्नेछ । सबै विमानस्थलमा सञ्चार उपकरणको सुधार र मानव संसाधनको विकास पनि जरुरी छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम तत्कालै अघि बढाउने कुनै योजना छ कि ?
निजगढ विमानस्थल कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामीले काम गरेका छांै । निर्माण मोडालिटीमा पनि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं, निजगढ र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उपत्यका नजिकै तराईमा आन्तरिक विमानस्थलहरू हुँदाहुँदै काभ्रेमा पनि विमानस्थल बनाउनुको औचित्य के हो ?
विगतमा पनि प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका नजिकै आन्तरिक विमानस्थल बनाउने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने विषय समेटिएकाले काठमाडौं उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण हुन्छ ।
युरोपियन यूनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न केही गर्दै हुनुहुन्छ ?
सन् २०१४ मा नेपाल आएको ईयू मिसनले दिएको सुझाव अनुसार हामीले हवाई सुरक्षामा धेरै सुधार गरिसकेका छौं । त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासो सूचीबाट निकालिसक्यो ।
हामीले ईयूका अधिकारीहरूलाई फेरि नेपाल आउन आग्रह गरिरहेका छौं । अब उनीहरूले अनुगमन गरे भने नेपाललाई आफैं सुरक्षा चासोबाट हटाउने छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो हेलिकप्टर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण के गर्दैछ ?
हेलिकप्टर दुर्घटना बढ्नुमा अनावश्यक जोखिम लिने प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । जाँच आयोगका प्रतिवेदनहरूमा पनि दुर्घटनाको मुख्य कारण खराब मौसम र मानवीय त्रुटि ठहर गरिएको छ । त्यसैले हेलिकप्टरमा पनि उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य गराएका छौं । सुरक्षा व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरू सुधारका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छौं ।